पशुपालनका लागि सहुलियत ऋणअन्तर्गत रु १३ करोड कर्जा प्रवाह « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
७ आश्विन २०७७, बुधबार ४ : ४१ बेलुका
गत आर्थिक वर्षमा तनहुँमा पशुपछीपालनका लागि सहुलियत ब्याजदरको ऋण सुविधाअन्तर्गत रु १३ करोड २६ लाख कर्जा प्रवाह भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा एक सय ८७ किसानले सहुलियत ब्याजदरको ऋण सुविधा लिएको भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र तनहुँले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार लक्ष्मी बैङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, कुमारी बैङ्क, सनराइज बैङ्क र कृषि विकास बैङ्कले ती किसानलाई पशुपछीपालनका लागि सहुलियत ब्याजदरको ऋण प्रवाह गरेका छन् ।
केन्द्रका प्रमुख डा. बालकुमार श्रेष्ठले सहुलियत ब्याजदरको ऋण सुविधा लिएका किसानले बाख्रा, कुखुरा र गाईभैसीपालन गरेको जानकारी दिए ।
दुई जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको कार्यालयले तनहुँमा नौ हजार चार सय ५४ र नवलपुरमा २८ हजार पाँच सय ३८ पशुमा कृत्रिम गर्भाधान गरेको सो कार्यालयका प्रमुख डा. बालकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार तनहुँमा पाँच हजार नौ सय ८८ गाई, तीन हजार चार सय १९ भैसी र ४७ बाख्रामा कृत्रिम गर्भाधान गरिएको छ । त्यस्तै नवलपुरमा २१ हजार ७ सय ६२ गाई, छ हजार ५ सय ३९ भैसी र दुई सय ३७ बाख्रामा कृत्रिम गर्भाधान गरिएको छ ।
डा.श्रेष्ठका अनुसार कृत्रिम गर्भाघान गरिएका २७ हजार ७५० गाईमध्ये ६५ प्रतिशतमा सफल भएको छ । त्यस्तै नौ हजार ९५८ भैसीमध्ये ५८ प्रतिशत र २८४ बाख्रामध्ये ४० प्रतिशतको सफल गर्भाधान भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ भन्दा २०७६÷७७ मा कृत्रिम गर्भाधान १२ प्रतिशतले बढेको छ । आव ०७५÷७६ मा २६ हजार ७१२ गाई, सात हजार २३७ भैसी र ५७ बाख्रामा कृत्रिम गर्भाधान गरिएको थियो ।
सरकारले नश्ल सुधार कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको छ । पशुहरूमा कृत्रिम गर्भाधान गराएमा कम उत्पादनशील स्थानीय पशुको उत्पादकत्व वृद्धि हुने, प्रजननका लागि भाले जनावर पाल्नु नपर्ने, हाडनाता प्रजननबाट उत्पादकत्वमा हुने ह्रास नहुने र प्रजननको माध्यमबाट सर्ने विभिन्न रोगबाट पशुको बचावट गर्न सकिने डा. श्रेष्ठले बताए ।